Sivavanye i-Android tablet Archos 101 kwaye sicinga ngayo | I-Androidsis
antocara | | Ezinye izixhobo, Reviews, Amacwecwe e-Android
Njengoko besesitshilo, besikade sivavanya ifayile ye- Ithebhulethi ye-Android Archos 101 iintsuku ezimbalwa esikushiya ngazo ukungabikho kwayo, Ndicinga ngaphezulu kokwanela ukwenza izigqibo kule thebhulethi. Esi sisixhobo endifuna ukusizama okoko ukubhengezwa kweenkcukacha zayo kwaye emva kokuvavanya i-Galaxy Tab nasemva kokusebenzisa i-iPad ngaphezulu kweenyanga ezi-4.
Ndihlala ndiyithetha kwaye ndicinga ukuba yeyona ilungileyo, zama ukuvavanya i-terminal ngaphambi kokuyithenga. Into enokuthi icothe kum, kuwe inokwanela.
Las Ukucaciswa kweArchos 101 unayo yonke apha iinkcukacha kunye neengcebiso ezithile endicinga ukuba zinokukunceda xa kuziwa khetha ithebhulethi ungayifumana apha. Oko kwathiwa, masifike kwinqanaba.
Ukusukela oko ndathi kuTwitter ukuba ndinesi siphelo bekukho imibuzo emininzi kunye nemibuzo ondibuze yona, kodwa mhlawumbi eyona ibingaphezulu kokuba ikhangeleka ngathi yi-iPad okanye ukuba ibhetele kune-iPad. Izinto mazenziwe zacaca kwasekuqaleni, iArchos 101 ayinanto yakwenza ne-iPad, nokuba yeyiphi na kwizixhobo zehardware okanye kunjalo i-Android isalungelelaniswe ngokufanelekileyo kwesi sigxina. Zizixhobo ezahlukileyo kakhulu kwaye ndicinga ukuba i-iPad iphezulu kakhulu kuneArchos.
Inxalenye eye yandiphoxa kakhulu malunga necwecwe lesiFrentshi ibe siscreen sayo. Ixesha lokuphendula kunye nobuntununtunu abubi, kodwa zombini ubukhali, ukukhanya, isisombululo, umahluko wombala kunye ne-engile yokubukela (ngakumbi) ziyaphucuka. Kuyinyani ukuba ixabiso lesiphelo lifikeleleka kakhulu kwaye ndisakholelwa ukuba umlinganiso womgangatho / wexabiso ulunge kakhulu kodwa kobu budlelwane bunye ndiyakholelwa ukuba into engcono ibinokuphunyezwa.
Ngokukhawuleza xa uhambisa ithebhulethi kancinci ukusuka kwindawo yayo efanelekileyo, akukho nto unokuyibona. Oku kwithebhulethi sisixhobo esiqhele ukusetyenziswa sibanjwe zizandla kunye nokushukuma, yingxaki.
Uyilo lwethebhulethi alukho kwisitayile sabanye esinemilo engaphezulu yesikwere, eli luxande, ndicinga ukuba ndizama ukuyibamba ngesandla esinye. Le inamalungu ayo amabi kunye namabi, kwaye ndiyikhetha ngokobuqu bayo bube buxande. Njengoko iArchos yenzelwe, ukuba ibekwe kwifom yokuma komhlaba kwaye kufuneka sisebenzise ikhibhodi, sisebenza ngaphandle kwesikrini.
Izinto ezenziwa ngazo esi sixhobo zincinci zeplastikhi ngasemva ezinesinyithi. Ayinangxaki, kuba sisixhobo esamkelekileyo.
Ngokususa le ngxaki kwi-screen IArchos 101 Yile nto uyiyo, itshiphu ebiza ixabiso eliphakathi, ekumgangatho ophakathi kunye nothotho lweenkcukacha ezenza umdla kwabo bafuna ukungena kwi-intanethi, ukulawula ii-imeyile, ukufunda iTwitter, ukutya, ukufunda, ukumamela umculo okanye ukubukela imovie, Bukela iimovie lo gama nje kungumdlali odityanisiweyo kwinkqubo, ukuba kungokukhanya kwento leyo iqhelekile. Yonke le nto yenziwe kakuhle kodwa usazi ukuba ukwenziwa kwayo akukhawulezi njengoko kufanelekile.
Ukusebenza ngokubanzi kuyacotha, utshintsho phakathi kwezikrini, ukuvalwa kwezicelo, ukuvulwa kwezi kwenziwa kancinci. Okanye ubuncinci indinika olovakalelo. Ngokuqinisekileyo oku kuyaphucuka ngokufika kweenguqulelo ezintsha ze-Android, kodwa namhlanje kunjalo. Ndifakile iziqalisi ezahlukileyo kodwa iziphumo ziyafana, ukuhambisa inkqubo kuya kudinisa.
Ukongeza, kwaye ngenxa yehardware enayo, asilindelanga ukuba siya kuba nakho ukuyisebenzisa kwimidlalo ngezigqibo eziphezulu kunye nemizobo emihle. Liqela elithobekileyo.
Iluncedo kakhulu kwimveliso ye-HDMI yokuyixhuma kumabonwakude kwaye ikwazi ukudlala kwizikrini ezinkulu okanye ukujonga iifoto. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into iluncedo kakhulu kwizibuko le-USB apho sinokudibanisa khona imouse okanye ikhibhodi okanye kwangaphandle idrive drive.
Ibhetri iziphatha kakuhle ngexesha kwaye ubomi bebhetri bungaphezulu kokwaneleyo ekusebenziseni okuqhelekileyo. Kwi-stanby inokuhlala kangangeentsuku ezingama-2-3, idlala ividiyo malunga neeyure ezingama-5-6 kunye nomxube endiwunike ukuyisebenzisa njengomfundi we-rss, umphathi we-imeyile, iTwitter kunye nokukhangela kwiwebhu malunga neeyure ezi-3 ngosuku, Ukugqibela kweentsuku ze-1,5 okanye mhlawumbi ixesha elide.
Andifuni ukuthetha nantoni na malunga nesoftware kuba kolu hlobo lwesixhobo kwaye xa ixatyiswa kakhulu kukuba i-Android ayikalungiselelwa iipilisi kwaphela. Ayisiyo inkqubo yokusebenza kwaye kungaphantsi kwezicelo ezingenako kuba zingenazo izixhobo zokwenza njalo. Konke oku kuya kuphucula ngokufika kweHoneyComb kodwa namhlanje, ngaphandle kwezicelo ezenziweyo yiSamsung kwithebhulethi yayo kwaye ezinye iArchos ziyilungiselele ithebhulethi yayo, akukho sicelo sikuvumela ukuba usebenzise olu hlobo lwesiphelo.
Ukufumana umbono wokuba le pilisi imele ntoni, singatsho ukuba yintoni iHtc Magic kwiNexus One.Ukuyithatha njenge-Nexus One ithebhulethi ekulungiselelwa yi-Motorola kunye noGoogle. Ukuba ufuna ukunxibelelana nento enecwecwe elibandakanya i-Android kunye nexabiso elinomdla, le yithebhulethi yakho. Ukuba unokulinda iinyanga ezimbalwa, kwaye uchithe ngaphezulu kancinci, ngokuqinisekileyo amava aya kuba nomvuzo ngakumbi kwiimodeli ezintsha eziza kubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Sivavanye i-Android tablet Archos 101 kwaye sicinga ngayo
Izimvo ezi-27, shiya ezakho
Ndicinga ukuba iividiyo zenziwe ngohlaziyo kubanda .54 hayi eyokugqibela .71, kuba kuloo micro iya kwi-800mhz, kwaye kwi .71 iya ku-1ghz ngaphandle kokulungiswa ngakumbi.
Amava atshintsha ngokugqibeleleyo, ukuba kuyinyani ukuba ngaphambi kwemidlalo enjengeziqhamo ze-ninja zazinganyamezeleki, ngoku akukho mfuneko yokuba nomona nge-ipad, kuyinyani ukuba izixhobo zekhompyutha azibhalwanga ekhaya kodwa okwangoku kukuthenga okuhle kakhulu , iitafile ezikhoyo ngoku ezine-tregra aziqhubeki zinamanzi amaninzi kunee-archos nge .71.
Ndimema i-ANDROIDSIS ukuba yenze olunye uvavanyo ngohlaziyo .71.
Ewe, ndibone ngale ntsasa ukuba bakhuphe i-froyo rom ethe kratya. Ingaba ihamba kanjani? Ingqele yokuqala yashiya kakhulu ukuba ifuneke.
Molo uFernando. Ividiyo iyinyani ukuba ikunye ne-Android 2.2 rom yokuqala kwaye ndikufakele uhlaziyo kwiintsuku ezimbalwa. Kuyinyani ukuba nolu hlaziyo lutsha ukusebenza kuyaphucuka ngandlela thile kodwa ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba ukuphucuka, nangona kulungile, kuyaqhubeka nokushiya ithebhulethi ngokuhamba kancinci kunye neengxaki ezinzulu xa udlala ividiyo kwi-web.
Ewe itshintshile kakhulu, ndonwabile, kodwa ngokunyaniseka ngokupheleleyo, le thebhulethi ishiya i-iPad inqweneleka kakhulu ngokubhekisele ekuphunyezweni kwenkqubo kunye nokusetyenziswa, yiyo le nto ibenzakalisa abantu abaninzi.
Nditsho kwaye ndiyaqhubeka nokugcina ukuba ngowona mgangatho wokuthengwa kwexabiso / ixabiso kodwa ukwazi oko sikuthengayo.
Andizimiselanga ukuzibandakanya kulo naluphi na uhlobo lwempikiswano okanye nantoni na enjalo kodwa ndizama ukuba nenjongo. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela
Andazi ukuba olu vavanyo luyinjongo kangakanani, ndingathi kunokuba yinto eqinisekileyo. awunyanzelekanga ukuba uthelekise iimveliso ezimbini ezahlukileyo njengeArchos kunye ne-Ipad.
Uvavanyo lwakho alunazinkcukacha zincinci zincinci zahlulahlula iArchos kwi-ipad:
1 / ipad ayinayo i-Usb
2 / ipad ayinasikhala sd sekhadi
3 / ipad ayinayo enye imveliso encinci ye-usb yokuvumelanisa
Kwaye okokugqibela i-android njengoko usazi ukuba ingumthombo ovulekileyo.Nge-ipad kufuneka utye into efunwa ngu-Apple kwaye iphelile.Zama ukudlulisa ifayile kwi-ipad esuka kwiselfowuni ngaphandle kwe-Apple.Ngoku uyawuqonda umahluko.Ndifuna ukukhumbula. IArchos yenza ithebhulethi yokuqala ye-4.5-intshi nge-250gb hard drive ngo-2004 xa iApple ingakhange iyile ipad
Kwaye okokugqibela i-android njengoko usazi ukuba ingumthombo ovulekileyo.Nge-ipad kufuneka utye into efunwa ngu-Apple kwaye iphelile.Zama ukudlulisa ifayile kwi-ipad esuka kwiselfowuni ngaphandle kwe-Apple.Ngoku uyawuqonda umahluko.Ndifuna ukukhumbula. I-Archos yenza ithebhulethi yokuqala ye-4.5-intshi nge-hard drive eyi-250gb kunye ne-Wi-Fi ngo-2004 xa u-Apple wayengakhange ayile ipad.kwaye onke amacwecwe e-archos ayekwangabarekhoda beengoma ze-48khz. Ngaba ixabisa iApple ipad? ibiza kakhulu kuneArchos?
ogqitha apha yonke imihla sitsho
Ndibhalela kuwe ebhedini ukusuka kwiArchos 101 yam. Bekufanele ukuba ndiyasebenza kodwa ndiye ndavumela ubunewunewu bokuthatha ikhefu lakusasa. Igajethi ilungele iimfuno zam. Kunokwenzeka ukuba kukho iipilisi ezingcono kakhulu kodwa ukuba igajethi ihlala iminyaka emi-3 ndonelisekile. Ukubulisa kubo bonke kunye neeholide ezimnandi.
I-PS: Nika ingqalelo i-fernando28, uhlaziyo kwi. 71 iphucula kakhulu ukusebenza
Phendula kulowo udlula apha yonke imihla
Sele undivumele ndibhabhe. Ndijonge phambili ekubuyeleni ekhaya.
Andifuni ukungena kwi-polemics konke konke 😀, kwaye ngokuqinisekileyo ayinakuthelekiswa ne-ipad, badlala kwiiligi ezahlukeneyo (ndicinga ukuba iApple linyathelo elinye phambili xa kufikwa ekusebenziseni isoftware kwiitheminali zabo), nangona kunjalo Kuyinyani ukuba ekuveliseni kwakhona ukusasaza kwiwebhu kuhamba kancinci ngokutsiba kunye nemida kungenxa yokuba iplagi ethile ye-archos yomxholo weflash ilinde ukuvunywa yi-adobe kwaye abayikhuphi (ukuba akukho ngxaki izakukhutshwa ngoJanuwari ), Kwaye sisebenzisa i-generic evela kwintengiso ukuba ayisiyiyo yonke into eyenzelwe i-101 njengoko kufanelekile.
Ngokubhekisele kwintsebenzo ngokubanzi kunye nohlaziyo olutsha kunye nokuyibeka kwimowudi yokuqhuba ngaphezulu, ayisiyiyo ukuba itshintsha kancinci, kukuba yenye yecwecwe (ngaphandle kokufana ne-ipad) kodwa akukho nto yakubamonela i-tegra 2 yokuqala eza Intengiso malunga ne-100 euro ngaphezulu.
Elinye inqaku ekufuneka ulithathele ingqalelo yinkxaso evela kwii-archos kunye nembonakalo enkulu ngasemva (yiyo loo nto ndaye ndagqiba kwelokuba ndithenge le hayi itab okanye i-mobii) kungekudala emva kokukhupha uhlaziyo kwi-froyo 2.2 (uguqulelo. 54) ifumene ( .71) ukulungisa iimpazamo ezininzi zangaphambili kwixesha leeveki ezi-2 (oku kubaluleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo).
Ngaphandle kokuchitha ixesha ndininqwenelela iKrisimesi EMNANDI kwaye ndiyabulela ngomsebenzi eniwenzayo kwi-ANDROIDSIS ngokusigcina sinolwazi.
Ewe ndinayo kunye nohlaziyo lokugqibela athi uFernando uyahamba, ndingathi, bhetele kune-ipad ...
Ngokubanzi, esi sikhokelo asithembekanga kwaphela.
Ndinayo i-galaxy tab kunye ne-iPad kwaye andicingi ukuba ithebhulethi iphezulu, nceda, kuba banayo, bacinga ukuba ingaphezulu kwithebhu ye-galaxy okanye i-iPad.
Damn ... kunjalo awungekhe uthelekise iiArchos kunye ne-SGTab okanye i-Ipad xq iarchos ixabisa i-280 vs 680 vs 480 euros ngokwahlukeneyo kufana nokuthelekisa isihlalo kunye neCorvette. Okanye into enje kwesinye isihlalo isebenza kakuhle kwaye kwabanye kubonakala ngathi yitapile. Awunakuthelekisa nokudlala kwabo kwiiligi ezahlukeneyo.
Enye yezinto ezimbi ... sitsho
Zingaphi izinto ezingenamsebenzi eziviwayo ...
Xa kukho ithebhulethi eneempawu kunye nexabiso learchos 7 yeThebhulethi ye-Intanethi, enexabiso elifanayo (i-euro ezingama-219), ndixelele ...
Phendula kwenye embi ...
Ndilindele uphononongo olungakhethi cala, andazi
Kucacile ukuba ayisiyi-ipad kodwa ndibenethuba lokuyivavanya kwaye ayimbi kangako kwividiyo ...
into edanyazayo, ii-archos zilungiselela iplagi kunye nokukhawulezisa izixhobo (zilinde isiqinisekiso se-adobe)
Malunga nemidlalo ye-3d, andazi ukuba zeziphi ozamile kodwa nayiphi na i-gameloft eyi-3d ephume kutshanje isebenza ngokugqibeleleyo (kuya kufuneka uthathe uhambo nge-xda okanye archosfans ukuyijonga)
Ndivumelana nawe kuphela kwiscreen, yonke enye ayibonakali ichanekile. Kodwa wonke umntu unomdla kwaye uqhele izinto ezahlukeneyo.
Kum kunokwanele (ndilinde enye), ayisiyi-ipad kodwa ayisiyiyo ne-apad, yile ndlela uyipeyinta ngayo apha
Kudala ndilandela ibhlog kwaye ndiyayixabisa yonke imizamo yakho.
Ndithenge iArchos 101 kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa sisipho esivela kookumkani kwaye khange ndiyivule. Izolo bendiye kwi-TPH kwaye bebenayo enye ekubonisweni ... bendiyithanda kakhulu ngokubanzi kuba, njengoko utshilo, kulungile kakhulu kwaye ngokoluvo lwam amaxesha okuphendula ayamkeleka. Kodwa ndishiye ndinencasa embi emlonyeni wam kwaye ndinento exhalabileyo ... Ndabona ukuba isikrini sinendawo ethe tyaba, njengemigca emi nkqo eyenza amaxande naphambi kwemizobo, yintoni leyo? okanye ibhlog Mabayeke bathethe ngayo ... kwaye ndishiye ndicaphukile, kuba iarchos 7 ithebhulethi ayinalo olo hlobo lwescreen ... njengokungazi kwam kwaye luhlobo oluthile lwetekhnoloji ... kodwa ndingavuya ukuba ungandixelela ukuba ingantoni.
Enkosi. Konke okugqibelele!
Phendula kwi pear
Ukuba ujonga ngokusondeleyo, zonke izixhobo ezisebenzayo zinesi sikhokelo, nangona ezinye sizifihla ngakumbi kunabanye. ndiyaqikelela ukuba kufuneka ibenento yokwenza nobuchule bayo bokusebenza
Uphononongo olulungileyo, nangona umxholo wokuqalisa uye wakhonkotha okuthile, kutheni ungashiyi okungagqibekanga endaweni yokukhetha i-android ngalo lonke ixesha ufuna ukubuyela kwiscreen esikhulu ?, Ngokwam ndikhetha isiqalisi se-zeam, i-adw EX nayo bathi ihamba kakuhle kakhulu, ndiyabona ukuba ithebhulethi kuphononongo ingaba uyifakile ¿??, kutheni ungayishiyi ikhona, kunye nethebhulethi iphucula kakhulu kutshintsho lwescreen. Njengoko usitsho kwinqaku, into enye yizixhobo zekhompyutha kwaye enye ithambile, kuyamangalisa ukubona indlela ithebhulethi enokuhamba ngayo ngokulula ngesiqalisi ngaphandle kwesiqhelo.
Elinye inqaku elibaluleke kakhulu kukugcina engqondweni ukuba le thebhulethi iyodwa, ine-256 mb yenkunzi yegusha, ngekhe uvule usetyenziso olunzima lwesikhangeli, buyela kwiscreen esikhulu, vula usetyenziso lwevidiyo, ubuyele kwiscreen esikhulu, jonga iifoto , Yazisa umxhasi we-twitter, ... njl njl ngaphandle kokugcwalisa ithebhulethi kunye nokwehla kokusebenza. Ukuthatha ithuba elingcono kwihardware kwaye wonwabele ngaphezulu kwento oyenzayo, kulula ukungena kumlawuli wenkqubo kwaye uvale usetyenziso olungasetyenziswanga ukukhulula inkunzi yegusha. Kukho usetyenziso lwasimahla olwenza oku ngasemva kuthi, umzekelo ukubamisela ukuba bavale iinkqubo zangasemva esingakhange sizisebenzise kwimizuzu emi-5 edlulileyo.
Enye into efanelekileyo kukusebenzisa ithebhulethi kwimowudi yokuqhuba ngaphezulu ukuze iye kwi-1 ghz, ngaphambi kolu hlaziyo lwamva nje olunokwenziwa nge-z4root kunye ne-setcpu, kunye nokufumana ingcambu yethutyana. Ndicinga ukuba ukubeka le ngcambu okwethutyana kuyeyona nto iphambili kwii-archos ekususeni le femu yokugqibela ngokukhawuleza.
Okokugqibela, kulindelwe ukuba ngombane oza kufumana ii-archos, ukusebenza kwe-flash kwisikhangeli kuya kuphucula.
Isishwankathelo: isixhobo sesixhobo: ii-angles zesikrini kunye ne-256mb yenkunzi yegusha kuphela
Iinkonzo (izinto ezininzi ezingenayo i-ipad): i-Android yinkqubo ekhululekile, sinokuvula ifayile kumhloli kunye nesicelo esiyifunayo, ukudibanisa kweso sixhobo kuquka ukukhutshwa kwe-hdmi, ifunda iipendrives, ii-drive zangaphandle, i-microsd amakhadi ……. Ngapha koko, ibetha i-ipad 8 kwaye sithetha ngecwecwe "eliphakathi kwinqanaba")
Ewe, i-rom entsha iyaziphucula izinto ezithile kodwa isenengxaki yokusetha ngokutsha kunye nokuphazamiseka.
Ndikwazile ukuvavanya i-10 pov mobii nge-tegra2 kwi-mediamarkt, eyayiyenye indlela endandikhetha ngayo kwaye indiphoxile kakhulu. Itoshiba folio, ebendingakhange ndiyithenge ngenxa yokunqongophala kwesitokhwe, ilungile, kodwa andiqinisekanga ukuba ibhetele kakhulu kune-archos. Into endiyibonileyo ngcono kuzo zombini kunee-archos ngumba wesikrini, weeengile ezimbi zokubukela.
Kwii-archos akunakubona nokuba ungaphambili, ihlazo, apho liyehla khona.
Ukusebenza ngokubanzi kulungile, sele i-1GHhz ngaphezulu. Okubi ukuba akubandakanyi ii -apps zikaGoogle, nangona zinokufakwa, kodwa umsebenzisi oqhelekileyo ngekhe.
Ifleshi kwiwebhu kufuneka itshintshe kakhulu, akunakubonwa ividiyo ye-youtube kwiwebhu, mabavuke.
Imidlalo, kuba umntu onomsindo uya kwimiboniso bhanyabhanya, kodwa ndizamile ukufaka imfuno yokuhamba ngesantya kwaye yandixelela isixhobo esingahambelaniyo, chukumisa u-c .. .. kube kanye xa ndithenge into emarikeni .. Ngaphantsi kakubi kune Umnyele uhamba kumdlalo bhanyabhanya.
Ukuba ucinga ngokuthenga ithebhulethi ye-android, okanye uyayithenga le, okanye iToshiba folio 100. Okucacileyo kukuba iya kuba yithebhulethi kuphela kude kube ngoMatshi, xa i-Motorola ikhupha ithebhulethi yayo eneHoneycomb, engayi kuba nanto yenza nefroyo.
Umcimbi we-ipad, kuba eneneni badlala kumaligi ahlukeneyo, ulwelo oluninzi kwaye lelinye ibali, kodwa kukuba eApple bayithatha kancinci ngokubeka izinto, nokuba yi-sd, okanye i-usb, okanye ukukhanya ...
mhlekazi x sitsho
Uhlalutyo olulungileyo kodwa ndifumana umbono wokuba ukucotha kunokubakho ngenxa yokuba neenkqubo ezininzi ngaxeshanye. Umzekelo, ndinomphathi womsebenzi ophambili efakwe ngokusisigxina kumthala wam 3 kuba ngaphambili, ifowuni yam yayiya kubanda qho kwimizuzu emibini. Ngoku ukuyicima okwesibini kundenza ndenze kraca kwaye ndikhululeke kwimisebenzi evulekileyo.
Phendula mhlekazi x
I-Buaf yeCwecwe lee-archos lubisi
Andizange ndicinge ukuba ndingayifumana.
Ndiyincoma wonke umntu.
Rosa - Ivenkile yeZilwanyana sitsho
Kucacile ukuba ukuba neendaba into ayizukuhamba kakuhle, kodwa yonke into ngumba wokuyivavanya kwaye ngokwento endiyifundileyo ayiyonto imbi njengoko abanye becinga.
Phendula kuRosa-kwiivenkile zezilwanyana
Eyona ndlela inokusebenziseka inyani, ndiyayithanda imbono. Inezicelo ezininzi ezinokwenzeka.
UJuan Arenas sitsho
Inkonzo yezobuchwephesha ebuhlungu bendizama ukusukela ngoDisemba ukundinika isisombululo sokulungisa ithebhulethi ngaphandle kweziphumo, kungacetyiswa.
Phendula uJuan Arenas
Ijagron gonzalez sitsho
Ndiyikhuphela njani intengiso ye-Android
Phendula Jagron Gonzalez
Ndine-archos 101 andazi ukuba kwenzeka ntoni kodwa andikwazi ukudibanisa i-USB encinci okanye i-USB inokundinceda kwidilesi yam drcgsoria @ hotmail.com
intle kakhulu i-youtube yakho
Molo ngokuhlwa, ndinetafile ye-intanethi ye-archos 101 kodwa andikwazi ukukhuphela nantoni na! Andiziboni iividiyo ezikwi-youtube njengoko indicela ukuba ndikhuphele i-adobe flash player kodwa andikwazi… umntu angandinceda ndisebenzise kakhulu ithebhulethi yam!
UAlejandro Diaz sitsho
Ndiyifomathile ithebhulethi ukuze ikwazi ukuyifaka kwakhona kuba ibonise imemori ngokuzeleyo ngawo onke amaxesha kwaye ihlala isebenza kancinci, ngaphandle kokususa yonke into kwaye ndiyishiya ku-zeros ndifaka izicelo ezi-3 kwaye yabonisa imemori igcwele kwakhona, inkonzo yezobuchwephesha I-Bogota Colombia imbi kakhulu kwaye isisombululo esibonisayo kukuthenga inani elikhulu lezinto ezincedisayo ukuze uqhubeke nokusebenza, kule minyaka mibini bendikunye nayo ukuba ndikwazile ukuyisebenzisa amaxesha ali-15 kakhulu ... Ndidanile ngophawu kunye nemveliso ...
Phendula kuAlejandro Diaz
Unyaka we-1 kunye naye, kwaye uxolo. Ngaphandle kwee -apps ze-10 kwivenkile yokudlala, zimbini kuphela ezinokufakwa.Isixhobo asixhaswanga kwi-2% yeapps. Iselfowuni yam yaseTshayina, akukho ngxaki iyahambelana nayo yonke, akukho ngxaki. Unethebhulethi yokufaka ii -apps, ungabinayo ingenanto. Ngokwam, ukuthenga okungalunganga.
Umdlalo weHero Sparta kwi-Android yasimahla kuwo onke ama-22 kaDisemba
Thelekisa: iGoogle Nexus S vs iPhone 4